Kusatsigira Imwe Hurumende Ipi Zvayo Kunze kweyaMwari | Umambo hwaMwari
Vanhu vaMwari vanoramba vasiri venyika nokuti vanotsigira Umambo
1, 2. (a) Mashoko api akataurwa naJesu achiri kutungamirira vateveri vake nanhasi? (b) Chii chakaedza kuitwa nevavengi vedu, uye sei tichiti vakakundikana?
JESU akamira pamberi paPirato, mutungamiriri aitonga vaJudha akanga aine simba zvikuru, ndokutaura mashoko achiri kutungamirira vateveri vake vechokwadi nanhasi. Akati: “Umambo hwangu hahusi hwenyika ino. Kudai umambo hwangu hwaiva hwenyika ino, vashumiri vangu vangadai varwa kuti ndirege kuiswa kuvaJudha. Asi, sezvazviri, umambo hwangu hahubvi panyika ino.” (Joh. 18:36) Pirato akaita kuti Jesu aurayiwe, asi kukunda kwacho kwaingova kwenguva pfupi. Jesu akazomutswa. Vatongi vaiva nesimba veUmambo hweRoma vakaedza kutsvaira vateveri vaKristu, asi zvakashaya basa. VaKristu vakaparadzira shoko roUmambo munyika yose panguva iyoyo.—VaK. 1:23.
2 Pashure pokugadzwa kweUmambo muna 1914, mamwe emadzimambo ane simba ati amborarama pasi pano akaedza kutsvaira vanhu vaMwari. Asi hapana kana akatikunda. Hurumende dzakawanda nemapato ezvematongerwo enyika vakaedza kutimanikidza kuvatsigira mumagakava avo. Havana kubudirira kutiparadzanisa. Nhasi uno vanhu vanotongwa neUmambo vakapararira munyika dzakawanda pasi pose. Kunyange zvakadaro, takabatana sehama nehama, tichiramba tisina kwatakarerekera panyaya dzezvematongerwo enyika. Kubatana kwedu kunoratidza zvakasimba kuti Umambo hwaMwari huri kutonga uye kuti Mambo Jesu Kristu achiri kutungamirira, kunatsiridza, uye kudzivirira vanhu vaanotonga. Ona kuti akazviita sei, paunoongorora dzimwe nyaya dzemumatare dzinosimbisa kutenda dzaakaita kuti tikunde sezvatinoramba ‘tisiri venyika.’—Joh. 17:14.
Nyaya Yakatanga Kukosheswa
3, 4. (a) Zvii zvakaitika pakazvarwa Umambo? (b) Vanhu vaMwari vagara vachinzwisisa zvakakwana nyaya yokusapindira mune zvematongerwo enyika here? Tsanangura.
3 Pakazvarwa Umambo, hondo yakatanga kudenga, Satani akabva akandwa pasi. (Verenga Zvakazarurwa 12:7-10, 12.) Pane hondo yakabva yatangawo pasi pano, yakaedza vanhu vaMwari ikaratidza pavamire. Shungu dzavo dzaiva dzokutevedzera muenzaniso waJesu wokusava venyika. Asi pakutanga vakanga vasinganyatsonzwisisi kuti kusapindira mune zvematongerwo enyika kunonyatsorevei.
4 Somuenzaniso, bhuku rainzi Millennial Dawn Volume VI, * iro rakabudiswa muna 1904, rakakurudzira vaKristu kusarwa muhondo. Asi raiti kana muKristu akapinzwa muchiuto, anofanira kuedza kuita basa risiri rokurwa. Kana izvozvo zvaramba, obva anzi aende kunorwa, anofanira kuva nechokwadi kuti haaurayi munhu. Achitaura nezvemamiriro ezvinhu panguva iyoyo, Herbert Senior, aigara muBritain uye akabhabhatidzwa muna 1905 akati: “Hama dzaitaura zvakasiyana-siyana uye hapana zano rakanyatsojeka raivapo nezvokuti zvakanga zvakanaka here kupinda muchiuto kuti unoita basa risiri rokurwa.”
5. Magazini yeThe Watch Tower yaSeptember 1, 1915, yakatanga sei kunatsiridza manzwisisiro ataiita?
5 Zvisinei, magazini yeThe Watch Tower yaSeptember 1, 1915, yakatanga kunatsiridza manzwisisiro edu panyaya iyi. Ichitaura nezvemashoko aiva mubhuku raStudies in the Scriptures, yakati: “Tinoona sokunge kuti ikoko kunenge kwava kubvuma zvatisingatendi.” Ko kana muKristu akanzi anopfurwa kana akaramba kupfeka hembe dzechiuto uye kupinda basa racho? Nyaya yacho yakati: “Chakaipa ndechipi, kupfurwa nokuti uri kutsigira Muchinda Werugare uye uri kumuteerera kana kuti kupfurwa uchishandira madzimambo enyika ino uye uchiatsigira, uku uchiita zvinopesana nedzidziso dzaMambo wedu wekudenga? Pazviviri izvi tingati zvatanga kutaurwa zviri nani, kufira kuti wakatendeka kuna Mambo wedu Wekudenga.” Pasinei nokuti mashoko iwayo aiva nesimba zvakadaro, nyaya yacho yakapedzisa nokuti: “Hatisi kuti muite saizvozvo. Tiri kungotaurawo kuti ndezvipi zviri nani.”
6. Wadzidzei pamuenzaniso waHama Herbert Senior?
6 Dzimwe hama dzakabva dzajekerwa nenyaya yacho zvokuti dzakanga dzagadzirira kufira kutenda kwadzo. Hebert Senior, ambotaurwa nezvake akati: “Kwandiri zvakanga zvisina kusiyana kuburutsa mabara mungarava [iro rainzi basa risiri rokurwa] nokuisa mabara acho mupfuti woiridza.” (Ruka 16:10) Hama Senior vakaendeswa kujeri nokuti vakaramba kupinda muchiuto nokuda kwehana yavo. Ivo nedzimwe hama ina vaiva pakati pevanhu 16, vaisanganisira vamwe varume vemamwe machechi, vakaramba kupinda chiuto nokuda kwehana vakaiswa mujeri reRichmond rekuBritain. Herbert nevamwe vaipomerwa mhosva yakaita seyake vakatomboendeswa muchivande nengarava kwaipisa hondo kuFrance. Vava ikoko vakatongerwa kuurayiwa vachiita zvokupfurwa. Iye nevamwe vanoverengeka vakamiswa mumutsetse kuti vapfurwe, asi havana kuzourayiwa. Panzvimbo pokuurayiwa vakazotongerwa makore gumi mujeri.
“Ndakasvika pakunzwisisa kuti vanhu vaMwari vaifanira kuva nerugare nemunhu wese, kunyange kana hondo ichitsviriridza.”—Simon Kraker (Ona ndima 7)
7. Pakazotanga Hondo Yenyika II, vanhu vaMwari vakanga vava kunzwisisa chii?
7 Pakazotanga Hondo Yenyika II, sangano raJehovha rakanga rajekerwa nokuti kusapindira mune zvematongerwo enyika kunorevei uye kuti kutevera muenzaniso waJesu kunoda kuti munhu aite sei. (Mat. 26:51-53; Joh. 17:14-16; 1 Pet. 2:21) Somuenzaniso nyaya yaikosha yaiva nomusoro unoti “Kusava Nekwatakarerekera” yemuNharireyomurindi yeChirungu yaNovember 1, 1939 yakati: “Mutemo wava kufanira kutungamirira vanhu vakaita sungano naJehovha iye zvino ndewokusatombova nedivi ravanotsigira pakati penyika dzinenge dzichirwisana.” Simon Kraker, uyo akazoshanda kumahofisi edu makuru muBrooklyn, New York, akataura nezvenyaya iyoyo achiti: “Ndakasvika pakunzwisisa kuti vanhu vaMwari vaifanira kuva nerugare nemunhu wese, kunyange kana hondo ichitsviriridza.” Zvokudya izvozvo zvinosimbisa pakunamata zvakauya panguva yakakodzera uye zvakabatsira vanhu vaMwari kugadzirira kuedzwa kwakasimba kwaizoitwa kuvimbika kwavo kuUmambo.
Vanopotsa Vanyudzwa “Norwizi” Rwokutambudzwa
8, 9. Uprofita hwaJohani hwakazadziswa sei?
8 Muapostora Johani akaprofita kuti pashure pokuzvarwa kwoUmambo muna 1914, nyoka, Satani Dhiyabhorosi, yaizoedza kutsvaira vatsigiri voUmambo hwaMwari ichiita zvokubudisa rwizi rwokufananidzira mumuromo mayo. * (Verenga Zvakazarurwa 12:9, 15.) Uprofita hwaJohani hwakazadziswa sei? Kubva kuma1920 zvichienda mberi, kutambudzwa kwevanhu vaMwari kwakawedzera. Hama Kraker vakakandwa mujeri nemhaka yokutsigira kwavo Umambo hwaMwari sezvakangoitwa dzimwe hama dzakawanda dzaigara kuNorth America nguva yeHondo Yenyika II. Tingatoti munguva yehondo, pavanhu vatatu voga voga vaiva mumajeri eUnited States, vaviri vavo vaiva Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvasungirwa kuramba kupinda muhondo nechikonzero chokunamata.
9 Dhiyabhorosi nevanhu vake vaida kuita kuti vanhu vanotongwa noUmambo vasiye kuperera kwavo muna Mwari, pasinei nekwavaigara. MuAfrica yose, muEurope, nomuUnited States, vaimiswa pamberi pematare edzimhosva nemamwewo matare aiona kana zvakakodzera kuti munhu asunungurwe asati apedza kupika. Kuramba vasina kwavakarerekera pane zvematongerwo enyika kwakaita kuti vaiswe mumajeri, varohwe, uye vakuvadzwe zvakaipisisa. MuGermany, vanhu vaMwari vakaedzwa zvakasimba nokuti vairamba kurumbidza Hitler kana kuti kubatsira muhondo. Vangasvika 6 000 vavo vakaiswa mumisasa yevasungwa mumazuva aitonga Hitler, uye vanopfuura 1 600 vemuGermany nevamwe vaibva kune dzimwe nyika vakafa vachitambudzwa. Kunyange zvakadaro, Dhiyabhorosi haana kukwanisa kukuvadza vanhu vaMwari zvachose.—Mako 8:34, 35.
“AKAFIRA KUKUDZA MWARI”
NGUVA yehondo yenyika yechipiri paitonga vaNazi, muGermany maingova neZvapupu zvaJehovha zvishomanana. Munyori wezvakaitika kare, Detlef Garbe akanyora kuti kunyange zvakadaro, “vanhu vakawanda vainge vakasungirwa kuramba chiuto nekuda kwehana . . . paitonga Third Reich vaiva Zvapupu zvaJehovha.” Mumwe wevanhu ava aiva Gerhard Steinacher wekuAustria, aiva nemakore 19. Mazuva mashomanana Hondo Yenyika II yatanga, hurumende yeNazi yakamusunga nekuti ainge aramba kupinda muuto reGermany.
Muna November 1939, Gehard akatongerwa rufu. Mwedzi iwoyo akanyora ari mujeri kuti: “Hapana chimwe chandinoda kunze kwekukudza Mwari, kuchengeta mirayiro yake, uye kumukumbira kuti tipinde muUmambo hwake, umo vanhu vachararama nokusingaperi vaine rugare.”
Musi wa29 March, 1940, kwasara zuva rimwe chete kuti aurayiwe, Gerhard akaonekana nevabereki vake nemashoko aya: “Ndiri mwana muduku. Ndinokwanisa kuwana simba rokuramba ndakamira, kana Ishe atondipa simba racho, uye izvi ndizvo zvandiri kukumbira.” Gerhard akaurayiwa mangwana acho, kuma6 mangwanani, zvichida achiita zvokudimburwa musoro. Paguva rake painge pakanyorwa kuti: “Akafira kukudza Mwari.”
“Nyika” Inomedza “Rwizi”
10. “Nyika” inofananidzira chii, uye yanga ichipindira sei ichibatsira vanhu vaMwari?
10 Uprofita hwakanyorwa nemuapostora Johani hunoratidza kuti “nyika,” iyo inofananidzira masangano nevamwe vanhu vanoti nzwisisei vari munyika, yaizomedza “rwizi” rwokutambudzwa, yobatsira vanhu vaMwari. Uprofita ihwohwo hwanga huchizadziswa sei? Kubvira pakapera Hondo Yenyika II, “nyika” yanga ichipindira kakawanda ichibatsira vatsigiri vakatendeka veUmambo hwaMesiya. (Verenga Zvakazarurwa 12:16.) Somuenzaniso, matare akakurumbira akasiyana-siyana akadzivirira kodzero yeZvapupu zvaJehovha yokuramba kupinda muchiuto uye kuita zvinoitwa nevamwe pakurumbidza nyika yavanogara. Kutanga, chimboongorora dzimwe nyaya dzakakura dzaive nechokuita nokupinda muchiuto idzo Jehovha akabatsira vanhu vake kukunda mumatare.—Pis. 68:20.
11, 12. Hama Sicurella naHama Thlimmenos vakatarisana nenyaya dzipi, uye dzakazopera sei?
11 United States. Anthony Sicurella mwana akarerwa nevabereki Zvapupu. Akabhabhatidzwa ava nemakore 15. Paakasvitsa makore 21, akanonyoresa kumahofisi anoona nezvokupinza chiuto kuti azivikanwe kuti mushumiri wechitendero. Papfuura makore maviri, muna 1950, akaenda kuti anochinja zvaakanga anyoresa kuti azivikanwe somunhu anoramba chiuto nokuda kwehana. Kunyange zvazvo sangano remunyika rinoferefeta nyaya reFederal Bureau of Investigation rakabvumirana naye, dhipatimendi rezvokutongwa kwenyaya rakaramba chikumbiro chake. Pashure pokunge yambopinda mumatare kanoverengeka, nyaya yaHama Sicurella yakazotongwa neDare Repamusorosoro reUnited States iro rakavatsigira rikadzima mutongo wakanga wambopiwa nedare repasi. Mutongo uyu wakazobatsira zvimwe zvizvarwa zvomuUnited States zvaisada kupinda muchiuto nemhaka yehana.
12 Greece. Muna 1983, Iakovos Thlimmenos akanzi nedare ane mhosva yokusateerera hurumende nokuti akaramba kupfeka hembe dzechiuto akabva akandwa mujeri. Paakabudiswa, akatsvaka basa rokuita akaunzi, asi akarambirwa achinzi akanga ambopara mhosva. Akaendesa nyaya yacho kudare, asi haana kubudirira mumatare emuGreece, saka akakwidza nyaya yake kudare rinoona nezvekodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights (ECHR). Muna 2000 Dare guru reGrand Chamber muECHR, raiva nevatongi 17, rakapa mutongo waimutsigira, zvikabatsira kuti dzimwe nyaya dzerusaruro dzizotongwawo saizvozvo. Mutongo uyu usati wapiwa, hama dzomuGreece dzaipfuura 3 500 dzaiva mumabhuku evakambopara mhosva nemhaka yokumboendeswa kujeri pamusana pokuramba chiuto. Pashure pomutongo uyu wakanaka, Greece yakagadza mutemo wokuti hama dzose idzodzo dzinzi hadzina kumbobvira dzapara mhosva. Zvakare, mumwe mutemo waipa zvizvarwa zveGreece kodzero yokuita rimwe basa risiri rechiuto, uyo wakanga wagadzwa makore mashoma akanga adarika, wakazonyatsojekeswa pakadzokororwa bumbiro remutemo remuGreece.
“Ndisati ndapinda mudare, ndakanyengetera nemwoyo wose kuna Jehovha, ndikanyatsonzwa achindidzikamisa.”—Ivailo Stefanov (Ona ndima 13)
13, 14. Unofunga kuti tinodzidzei panyaya yaIvailo Stefanov neyaVahan Bayatyan?
13 Bulgaria. Muna 1994, Ivailo Stefanov aiva nemakore 19 paakadanwa kuti apinde muchiuto. Akaramba kupinda muchiuto kana kuti kuita rimwe basa rinotungamirirwa nemauto kunyange ringasava rokurwa. Akatongerwa mwedzi 18 mujeri asi akakwidza yacho achiti ane kodzero yokuramba chiuto nechikonzero chehana. Nyaya yake yakazopedzisira yasvitswa kuECHR. Muna 2001, nyaya yacho isati yatombopinda mudare, hurumende yakaita zvokutaurirana naHama Stefanov vakawirirana. Hurumende yeBulgaria haina kuzongosunungura Hama Stefanov voga asi kuti zvizvarwa zvose zvemo zvaida hazvo kuita rimwe basa risinei nechiuto zvakanga zvava kubvumirwa. *
14 Armenia. Vahan Bayatyan akanga ava kukodzera kupinzwa muchiuto muna 2001. * Akaramba kupinda muchiuto nechikonzero chehana asi haana kubudirira paakakwidza nyaya yake mumatare emo. Muna September 2002, akatongerwa kupika makore maviri nehafu asi akazobudiswa apika mwedzi gumi nehafu. Ari mujeri, akakwidza nyaya yake kudare reECHR rikaitambira. Asi musi wa27 October, 2009 dare iroro rakamuti aiva nemhosva. Mutongo iwoyo wakaita sewapedza simba hama dzemuArmenia dzakanga dzakatarisana nenyaya yakafanana neiyi. Asi dare reGrand Chamber reECHR rakaongorora mutongo wacho. Musi wa7 July, 2011, Dare racho rakati Vahan Bayatyan vakanga vasina mhosva. Aka kaiva kekutanga kuti ECHR ibvume kuti munhu anoramba chiuto nekuda kwehana zvichibva pachitendero chake anofanira kudzivirirwa nekodzero yerusununguko rwokufunga, rwehana, uye rwekunamata. Mutongo iwoyo haungodziviriri kodzero yeZvapupu zvaJehovha chete asi yemazana emamiriyoni evanhu vari munyika dziri musangano reCouncil of Europe. *
Hama dzemuArmenia dzinofara zvikuru nemutongo wakapiwa neECHR uyo unochengetedza kodzero yevaya vanoramba chiuto nemhaka yezvavanotenda
Nyaya Yezvinoitwa Nevanhu Pakurumbidza Nyika Yavo
15. Nei vanhu vaJehovha vachiramba kuita zvinoitwa nevamwe pakurumbidza nyika dzavo?
15 Vanhu vaJehovha vanoramba vachitsigira Umambo hwaMesiya nokuramba kupinda muchiuto uyewo kuramba noruremekedzo kuita zvinoitwa nevamwe vachirumbidza nyika yavo. Vanhu vakatanga kunyanya kukudza nyika dzavo pakatanga Hondo Yenyika II. Zvizvarwa zvemunyika dzakawanda zvinonzi zviite mhiko yokuti zvichava zvakavimbika kunyika yazvo, nokuimba nziyo dzokurumbidza nyika, kana kuti kusaruta mureza. Asi isu tinozvipira kuna Jehovha chete. (Eks. 20:4, 5) Izvi zvinoita kuti titambudzwe zvikuru. Kunyange zvakadaro, Jehovha akashandisazve “nyika” kumedza kumwe kupikiswa uku. Cherechedza shomanana dzenyaya dzakadaro dzinoshamisa dzatakaitwa kuti tikunde naJehovha achishandisa Kristu.—Pis. 3:8.
16, 17. Lillian naWilliam Gobitas vakatarisana nenyaya ipi, uye wadzidzei panyaya yacho?
16 United States. Muna 1940, vatongi 8 pavatongi 9 veDare Repamusorosoro reUnited States vakatonga vachiti Lilian Gobitas, * aidzidza paChikoro cheMinersville, aiva nemhosva. Lillian Gobitas, aiva nemakore 12, nehanzvadzi yake William, aiva nemakore 10, vaida kuramba vachitsigira Jehovha, saka vakaramba kusaruta mureza kana kudzokorora mashoko okurumbidza nyika. Izvi zvakaita kuti vadzingwe chikoro. Nyaya yavo yakaendeswa kuDare Repamusorosoro, rikatonga kuti zvaiitwa nechikoro zvaienderana nebumbiro romutemo nokuti zvaiita kuti “nyika ibatane.” Mutongo iwoyo wakaita kuti titambudzwe zvokutambudzwa zviya. Vana vakawanda veZvapupu vakadzingwa kuzvikoro, Zvapupu zvaishanda zvikadzingwa mabasa, uye zvimwe zvakawanda zvakarwiswa nemhomho dzevanhu. Bhuku rinonzi The Lustre of Our Country rinoti “kutambudzwa kwakaitwa Zvapupu kubvira muna 1941 kusvika muna 1943 kwaiva kusanzwisisa zvitendero zvevamwe kukuru kwati kwamboitika makore ano muAmerica.”
17 Kukunda kwakaita vavengi vaMwari kwaiva kwechinguvana. Muna 1943, Dare Repamusorosoro rakatonga imwe nyaya yakanga yakafanana neyaLillian naWilliam Gobitas. Nyaya yacho yaiva pakati peWest Virginia State Board of Education nevana vekwaBarnette. Panguva ino Dare Repamusorosoro rakatonga richitsigira Zvapupu zvaJehovha. Ndiko kaiva kekutanga muUnited States kuti Dare Repamusorosoro richinje mutongo panyaya dzakafanana munguva pfupi yakadaro. Pashure pomutongo iwoyo, kutambudzwa kwevanhu vaJehovha muUnited States neruzhinji kwakadzikira zvikuru. Uye kodzero dzevagari vose vemuUnited States dzakasimbiswa nenyaya iyi.
18, 19. Pablo Barros akati chii chakamubatsira kuramba akasimba, uye vamwe vashumiri vaJehovha vangatevedzera sei muenzaniso wake?
18 Argentina. Pablo Barros aiva nemakore 8 nomunun’una wake Hugo, aive nemakore 7 vakadzingwa chikoro muna 1976 nokuti vakanga varamba kuita zvaiita vamwe paisimudzwa mureza. Mumwe musi mukuru wechikoro akasundidzira Pablo ndokumurova musoro. Akaita kuti vakomana vacho vose vasare pachikoro kweawa, achiedza kuvamanikidza kuita zvinhu zvokutsigira nyika. Achiyeuka nhamo yacho Pablo akati: “Dai ndisina kubatsirwa naJehovha, ndingadai ndisina kuramba ndakasimba pamuedzo wokuti ndisaperera kwaari.”
19 Pakaendeswa nyaya yacho kudare, mutongi akati chikoro chakanga chisina kukanganisa pachakadzinga Pablo naHugo. Asi nyaya yavo yakakwidzwa kuDare Repamusorosoro reArgentina. Muna 1979, Dare iroro rakadzima mutongo wakanga wapiwa nedare rokutanga, richiti: “Chirango ichi [chokudzinga chikoro] chinopesana nekodzero yokudzidza iri mubumbiro romutemo (Chikamu 14) uye basa rehurumende rokuva nechokwadi chokuti vana vose vawana dzidzo yepuraimari (Chikamu 5).” Kukunda ikoko kwakabatsira vana veZvapupu vangasvika 1 000. Vamwe vavo havana kutozodzingwa uye vamwe, vakadai saPablo naHugo, vakabvumirwa kudzoka kuchikoro.
Zvapupu zvakawanda zvechiduku zvakaramba zvakatendeka pazvaiedzwa
20, 21. Nyaya yaRoel naEmily Embralinag inosimbisa sei kutenda kwako?
20 Philippines. Muna 1990, Roel Embralinag, * aiva nemakore 9, nehanzvadzi yake Emily aiva nemakore 10, nevamwe vana veZvapupu vangasvika 66, vakadzingwa chikoro nokuti vakaramba kusaruta mureza. Leonardo, baba vaRoel naEmily, vakaedza kutaura nevakuru vechikoro zvikaramba. Pavakaona nyaya yacho yakora muto, baba vacho vakaikwidza kuDare Repamusorosoro. Vakanga vasina mari uye gweta rokuvamiririra. Mhuri yacho yakanyengetera nemwoyo wose kuti Jehovha aitungamirire. Nguva yose iyoyo vana vaingonyombwa vachisekwa. Baba vavo vaifunga kuti vaisazobudirira panyaya iyi nokuti vaisaziva zvomutemo.
21 Zvakazoitika ndezvokuti mhuri yacho yakazomiririrwa naFelino Ganal, gweta rakanga ramboshandira imwe kambani yakakurumbira yemagweta munyika imomo. Pakaitika nyaya iyi, Hama Ganal vakanga vasiya basa ravo vava mumwe weZvapupu zvaJehovha. Nyaya yacho payakasvitswa kuDare Repamusorosoro, vatongi varo vose vakatsigira Zvapupu rikati vana vadzokere kuchikoro. Vaya vaida kuparadza kuperera kwevanhu vaMwari vakakundikana zvakare.
Kusapindira Mune Zvematongerwo Enyika Kunotibatanidza
22, 23. (a) Chii chakaita kuti tikunde panyaya dzinokosha dzakawanda mumatare? (b) Rugare rwedu nehama dzedu dzemunyika yose runoratidzei?
22 Nei vanhu vaJehovha vakakunda panyaya dzakawanda kudaro dzinokosha dzemumatare? Hatina simba panyaya dzezvematongerwo enyika. Asi munyika dzakawanda nemumatare akawanda, vatongi vanonzwisisa vanga vachitidzivirira kuvavengi vasinganeti kutirwisa uye pazvaiitika zvanga zvichitoita kuti mitemo yenyika igadziridzwe. Hapana mubvunzo kuti Kristu anga achititsigira kuti tikunde. (Verenga Zvakazarurwa 6:2.) Tinokwidzirei nyaya idzi kumatare? Chinangwa chedu hachisi chekuvandudza matongerwo anoitwa nyaya mumatare. Asi kuti chinangwa chedu ndechokuti tirambe tichiita basa raMambo Jesu Kristu, pasina chinotitadzisa.—Mab. 4:29.
23 Munyika yakaparadzaniswa nemagakava ezvematongerwo enyika uye yakazara noruvengo, Mambo wedu ari kutonga, Jesu Kristu, ari kukomborera zviri kuedza kuitwa nevateveri vake kuti varambe vasina kwavakarerekera munyaya dzematongerwo enyika. Satani akundikana pakuedza kutiparadzanisa kuti atikurire. Umambo hwakaunganidza mamiriyoni evanhu vari kuramba ‘kudzidzazve kurwa.’ Rugare rwedu nehama dzedu dzemunyika yose chishamiso chaicho uye runoratidza zviri pachena kuti Umambo hwaMwari huri kutonga!—Isa. 2:4.
^ ndima 4 Bhuku iri rinozivikanwawo nezita rokuti The New Creation. Mabhuku ainzi Millennial Dawn akazenge ava kunzi Studies in the Scriptures.
^ ndima 8 Kuti uwane pakakurukurwa uprofita uhwu, ona bhuku raZvakazarurwa—Mugumo Wazvo Une Mbiri Wava Pedyo!, Chitsauko 27, mapeji 184-186.
^ ndima 13 Pakawiriranwa zvakare kuti hurumende yeBulgaria ipe vanhu vanoramba chiuto nekuda kwehana rimwe basa risiri rechiuto richitungamirirwa nevanhu vasiri mauto.
^ ndima 14 Kuti unzwe nyaya yacho yose, ona nyaya inoti “Dare reEuropean Court Rotsigira Kodzero Yokuramba Kupinda Muchiuto,” yakabuda muNharireyomurindi yaNovember 1, 2012.
^ ndima 14 Mumakore anosvika 20, hurumende yeArmenia yakanga yaisa mujeri Zvapupu zvechiduku zvinopfuura 450. Vokupedzisira vavo vakabudiswa muna November 2013.
^ ndima 16 Zita remhuri yacho rakapereterwa zvisiri izvo muzvinyorwa zvemudare richinzi Gobitis.
^ ndima 20 Zita remhuri yacho rakapereterwa zvisiri izvo muzvinyorwa zvemudare richinzi Ebralinag.
Ungatsanangura sei chinoita kuti vanhu vaJehovha varambe vasingapindiri mune zvematongerwo enyika?
Kukunda kwedu mumatare kunokudzidzisei nezveUmambo hwaMwari?
Ungaratidza sei kuti hautsigiri imwe hurumende ipi zvayo kunze kweUmambo hwaMwari?